Shirwaynihii Maalgashiga Afrika Oo Barito Addis Ababa Kafurmaya. - Cakaara News
Shirwaynihii Maalgashiga Afrika Oo Barito Addis Ababa Kafurmaya.
Addis Ababa(CN) Isniin.June.29.2015 Shirwaynaha Maalgashiga Afrika oo diirada saaraya sidii kor loogu qaadi lahaa maalgashiga Afrika ayaa maalinta bari ah ka bilaabanaya xarunta midowga Afrika ee caasimada Addis Ababa.
Shir waynahan maalgalishiga oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxaa lafilayaa inay kasoo qayb galaan in kabadan 200 oo qof oo ay kamid yihiin madaxda iyo wasiirada bangiyada ee dalalka Afrika, Shiinaha iyo Jimciyada quruumaha kadhaxaysa. Waxaana shirkan dawlada Itoobiya qabashadiisa kala kaashaday haayada qaramada midoobay, dawlada shiinaha, Bangiga aduunka, bangiga horumarinta ee Shiinaha, iyo mashruuca horumarinta Afrika ee Shiinaha.
Sida ay sheegayaan qaar kamida warbaahinta, waxaa shirkani muuqata in lagusii xoojinayo xidhiidhka maalgashi ee u dhaxeeya wadamada Afrika, dalkaas Shiinaha iyo bahwaaagta horumarineed ee caalamiga ah.
Sidoo kale waxaa uu noqonayaa qodobka ugu wayn ee ay wasiirada iyo qaybaha bangiyadu shirkan kaga hadli doonaa dhinacyada waxsoosaarka fudud. Waxaana si qoto dheer shirkan loogu gorfayn doonaa sidii loo xoojin lahaa maalgashiga islamarkaana loo balaadhin lahaa warshadaha iyo waxsoosaarka.
Iyadoo laga duulayo warbixinta uu bangigaga aduunku kasoo saaray haayadaha iskaashiga horumarineed, dalka iyo maalaqabeenada caalamiga ah, taasoo kor u qaadaysa maalgashiga.